TW uchungechunge 50% -75% Sausage, ukudla okusheshayo-eqandisiwe, izindawo zokudla, ukudla okulula, nososo
TC uchungechunge 50% -75% ukudla imifino, imikhiqizo inyama, izindawo zokudla, ukudla okulula, nososo
TF uchungechunge 50% -75% ukudla imifino, imikhiqizo inyama, izindawo zokudla, ukudla okulula, nososo
uchungechunge TB 50% -75% ukudla imifino, imikhiqizo inyama, izindawo zokudla, ukudla okulula, nososo
Note: Ezibekiweko ejwayelekile kukhona kuphela inkomba, ngokwezifiso sebhithi silwenza owamukelwa. Okuningi ukwaziswa okuningiliziwe kubandakanya MSDS ishidi, eziningi isisindo, ukupakisha isimo, isikhathi lead futhi intengo konke ngomumo ku isicelo, sicela uchofoze nje at isicelo kwikhotheshini, uzothola impendulo yethu ngokushesha kungakapheli amahora angu-24.
Okulandelayo: Ester Gum Manufacturer 8016
Q1: ngiyathanda ukuzwa imikhiqizo yakho, kodwa manje kungijabulisa aphume China, ungakwazi yini ukunikela amalebula akho ezweni lami?
Q2: Ngingayithola kanjani izibonakaliso?
Q3: Ingabe kungenzeka ukuba ngokwezifiso amalebula ne design yami?
Q4: Ngingenzenjani ukukhulula yokukhokha kuwe?